Dhammaan gawaari-gacmeedka laga isticmaalo guryaha, meheradaha, iyo daaradaha qoysaska badni deggan yihiin ee SeaTac ayaa dib loogu astaamayn doonaa tilmaamha adeegga la cusbooneysiiyay iyo macluumaadka kula xiriirka muddada ay tahay bisha Juun. Gawaari-gacmeedka meelaha la deggan yahay ayaa la astaamayn doonaa maalinta qashin qaadka isla markuu gaari-gacmeedku yaal jidka dhinaciisa.
Illaa wakhtigaas, haddii aad wax su’aalo ah aad qabto, fadlan nagala soo xiriir 206.767.1166 amaseatac@cleanscapes.com.
Gawaari-gacmeedka Qashinka Cuntada & Ardaaga ayaa la keeni doona
Macaamiisha ay hadda u rukunsan tahay adeegga ka qaadka qashinka cuntada iyo ardaaga ayaa ku siin wadan ka qaaditaanka oo laguma dallacayo ujro dheeraad ah adeeggan.
Baqshadaha Macluumaadka Goobaha Qoysaska Badan iyo Ganacsiyada ayaa Boosta La Soo Dirar
Nabadeey SeaTac! Recology CleanScapes ayaa ku faraxsan inay siiso adeegyada qashinka, dib-u-warshadaynta, iyo qashinka cuntada & ardaaga lagaga qaado beeshaada laga bilaabo Juun 1, 2014.
U-diyaargarow ahaan adeegyada cusub, ayay Recology CleanScapes u diri doonta "Baakado Soodhawayn" dhammaantood meheradaha iyo meelaha qoysaska badani deggan yihiin SeaTac Mey.